बाइकलाई के थाहा कि पेट्रोल हो कि पानी ? - E Net Nepal
Home Jokes बाइकलाई के थाहा कि पेट्रोल हो कि पानी ?
बाइकलाई के थाहा कि पेट्रोल हो कि पानी ?
E NET NEPAL 4:30 PM Jokes,
एक पटक धतुरे आफ्नो गाउँ जाँदा आफ्नो मोटरसाइकल लिएरै गयो । जब गाउँको नजिकै पुग्यो तब एकाएक पेट्रोल सकियो । धतुरे मोटरसाइकल घिच्याउदै हिंडिरहेको थियो । यतिकैमा चतुरे त्यहि बाटो हुँदै कतै गैरहेको थियो । चतुरेलाई देखेर धतुरेले सोध्यो,
धतुरे : हेल्लो ! दाजु के यहाँ कतै पेट्रोल पम्प छैन ? मेरो बाइकमा पेट्रोल सकियो ।
चतुरे : (केहिबेर गम खाएर सोचिसकेपछि) यो रातको बेलामा यो गाउँमा कहाँको पेट्रोल पम्प खोज्दै हिंड्नु भएको त ! खुरुक्क पानी हालेर चलाउनुहोस न !
धतुरे : पानीले बाइक चल्दैन नि त !
चतुरे : ह्या ! यो रातको समयमा बाइकलाई के थाहा कि पेट्रोल हो कि पानी !
By E NET NEPAL at 4:30 PM